नागरिक जल्दा… भाग १ | शहरबाट शब्दहरु
« म प्रलय चाहन्छु
तिमी नहुँदा … »
नागरिक जल्दा… भाग १	नागरिक जल्दा !
पत्रकारिताले विधिवत् १ दशक नाघेको छ । स्पेश टाईम्समा छापिएको मोफेसलको पहिलो तस्वीर छापिए पछि मेरो फोटो यात्रा अघि बढ्यो । मेरो लागि प्रेरणा बनेका दर्जनौ गुरुहरुले त्यो अवस्थामा निकै साथ र हात दिनुभएको आजसम्म ऋणी नै छु । पत्रकारिताको यो समयले यत्ति फड्को मार्ला सोचेको थिएन । तर युग र समयलाई मात दिँदै निकै अघि पुगेको रहेछ ।
राजधानीका सबै दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक हुँदै केही वर्ष अघिबाट वेव समाचार साईटमा समेत मेरो पत्रकारिता यात्राले स्वतन्त्र बन्दै आवद्ध रहेको छ । यसलाई बिस्तारित अर्थमा परिचायक बनाउँदा स्पेश टाईम्स, हिमालय टाईम्स, नेपाल समाचारपत्र, अन्नपूर्ण, कान्तिपुरहुँदै हिमाल खबरपत्रिका र युवामाच रोजगार माचलगायत दर्जनौ पत्रपत्रिकामा आफ्नो लेखन र तस्वीर पस्किन पाएँ । यसको लागि पत्रिकाका सम्बन्धित दाजुहरुमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।
सन्दर्भ पेशागत पत्रकारिता भन्दा पनि एक विषयको हो । जुन मेरो पत्रकारितामा निकै दुखद घटनाको रुपमा मनमा अझै बिझिँरहेको छ । भदौ १६ मा स्पेश टाईम्स जल्नुको पीडा कताकता बल्झिरहन्छ । शायद पेशालाई सम्बन्धित मिडियामा उठबस गराएर होला वा हुनसक्छ न्यानो सम्बन्धको कारण । आजैको दिनमा समेत निरन्तर समाचार तथा तस्वीरहरु विभिन्न पत्रपत्रिकामा स्थान पाईरहेकोमा म गर्व गरिरहेको छु ।
भर्ख्रर एक वर्षको पाईला नाघेको नागरिक दैनिकसँग पनि मेरो पत्रकारिता यात्राले न्यानो साथको मोका पाएको छ । करिब १ दर्जन जति लेख र तस्वीरहरुले स्थान पाएको नागरिक दैनिकले मलाई केही हदसम्म हर्षित बनाएको थियो । तर एक घटनाको कारण दोश्रोपटक मन जलेको छ ।
एक बिहान म लेखनमा व्यस्त थिए । एनेकपा माओवादी ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज ललितको फोन बज्यो । सम्वाद भयो । वहाँले तपाईको लागि स्कुप न्यूज छ लगनखेल आउनुस् भनेर समाचार संकलनको निम्तो दिनुभयो । समाचारको बारेमा केही जिज्ञासा राखे । नागरिक जलाउने वहाँले जवाफ दिनुभयो । यो शब्दले मेरो निकै गहिराईसम्म धक्का लाग्यो । म क्षणभर स्तव्ध भएँ । मेरो पेशा विसर्िए । म निकैबेर टोलाए र निस्किए गतव्यतिर । जहाँ नागरिक दैनिक जलाउने कार्यक्रम राखिएको थियो । बाटैभरि मनमा अनेक पीडा मच्चिदै थियो । मानसपटलमा स्पेश टाईम्स जलेको दृश्य बृतचित्र सरह घुमिरहेको थियो । सँगै नागरिक जलेको धुँवा काल्पनिक दृश्यपनि । बाटोभर केही कु्राको याद रहेन । कति चाँडै म चोकको भीडमा पुगे पत्तै पाईन ।…
This entry was posted on जुन 6, 2010 at 4:42 बिहान and is filed under म र मेरो कुरा, मेरो लेख. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	ट्यागहरु: अन्नपूर्ण, एनेकपा, दैनिक, नागरिक, नेपाल समाचारपत्र, पत्रकारिता, पाक्षिक, माओवादी, मासिक, ललितपुर, साप्ताहिक, स्पेश टाईम्स, हिमाल खबरपत्रिका, हिमालय टाईम्स	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.
2 टिप्पणीहरु on “नागरिक जल्दा… भाग १”
Pant,Dibakar,In the US Says:	जुन 6, 2010 at 8:32 अपराह्न Subin Jee,
Indeed,it was not only sad and painful event to you but it was same to all lover of freedom of press and expression.Its really been unfortunate to Nepal that this nation degrading and discredited by the so called builders of ‘Naya Nepal’in the name of Loktantra.
जवाफ फर्काउनुहोस् Rajendra Says:	जुन 7, 2010 at 4:55 अपराह्न It ultimately proved that the news published in the “Nagarik’ was true, though Dr. Bhaktaman and his family are afraid to disclose the truth. What is the use of burninganewspaper by such blind cadres who even don’t realize the freedom of press.